Archive de l'auteur | NewsMada | Page 930
Haody : kolontsaina malagasy
Par Taratra sur 05/08/2016 Divers, NS Malagasy
Misy mitady hanafangaro ! Tsy fanahiniana fa vokatry ny tsy fahalalana. Nanjary tafiditra ao anatin’ny kitapo iray ny kolontsaina malagasy sy ny kolontsaina tsy an’ny Malagasy. Ahitana io tranga io avokoa ny karazan-javakanto sy kolontsaina rehetra. Anisan’ireny ny hira, dihy, tantara, sns. Mahasadaikatra ihany, ohatra, ny maheno ireo hira na feon-kira malagasy tsy ananan’izao tontolo izao […]
Ady amin’ny asa fampihorohoroana : miantso ny vahoaka hanome tanana ny praiminisitra, nefa…
Par Taratra sur 05/08/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Lasa mampihorohoro ny asa fampihorohoroana. Miantso ny vahoaka hanolo-tanana hiadiana amin’izany ny praiminisitra, nefa… “Ny azo atao aloha, miezaka ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro filaminana manao izay fomba rehetra ahafahana miady amin’izany fampihorohoroana eran-tany”, hoy ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana O., teny Antaninarenina, omaly. Efa manao tolo-tanana koa ny fanjakana malagasy amin’ireo firenena mpiara-miombon’antoka hanampy amin’izany. […]
Fanorenana fotodrafitrasa : ho avy ny vahiny hijery ny fanomanana ny Frankofonia
Tsy hitsangatsangana. Ho avy hitsidika eto amintsika ary hanombana ny fizotry ny asa fanomanana ny handraisana ny Frankofonia ireo vahiny, avy amin’ny firenen-tsamihafa. Intelo miantoana ny fahatongavan’izy ireo. Eo ireo ho avy ny 22 aogositra, ny 5 septambra ary mamarana azy ny 8 septambra izao. Ho fantatra eo ny fahavitan’ny asa rehetra, toy ny lalana, […]
“Tokony hatao ny mangarahara ny amin’ny fanatanterahana io Frankôfônia io. Inona no maharatsy ny fahazoana vola any ivelany? Hazavao amin’ny vahoaka… “ Io ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny antoko Avana, ny Dr Robinson Jean-Louis, momba ny fampiantranoan’i Madagasikara ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia eto Antananarivo, ny 22-27 novambra ho avy izao. “Ohatrinona marina no entin’ny Malagasy amin’ny […]
Par Taratra sur 05/08/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nanao hazalambo ireo olon-dratsy ao Toamasina ny polisy any an-toerana. Jiolahy sy jiovavy miisa 15 be izao indray sarona teo am-panaovana asa ratsy, ny alarobia teo. Tamina fokontany maromaro any an-drenivohitr’i Toamasina ny nahasamborana ireo olon-dratsy ireo. Enina mirahalahy voasambotra tao Ambolomadinika, Tanamborozano, Ambalankisoa ka ny iray amin’ izy ireo vao avy nivoaka ny fonja […]
Ambany tanàna : nahavitana taozavatra ny tsikafonkafona
Ahavitana kojakoja fampiasa ambony latabatra isakafoana, ny poketra sy kitapo, seza, kapa… ny tsikafonkafona. Nifarana, omaly ny fiofanana ho an’izy 23 avy eny ambany tanàna momba ny fanodinana ity zavamaniry ity ho taozavatra. Hanome asa maharitra ho an’ireo tsy an’asa maro ny tsikanfonkafona. Tsy mitaky fari-pahaizana rahateo ny fiofanana momba izany. Nanohana ity tetikasa ity […]
Ampitatafika : nidoboka eny Antanimora ilay mpangalatra kaonterana
Par Taratra sur 05/08/2016 Faits Divers
Naiditra am-ponja eny Antanimora, omaly hariva ilay jiolahy nisandoka ho mpiasan’ny Jirama sady nangalatra kaontera. Nahitana kaontera halatra marobe tao an-trano nandritra ny fisavan’ny zandary. I Moravelo Kevin no anaran’ity jiolahy tratran’ny zandary teny Ampitatafika ity. Araka ny fanazavan’ny zandary, mody mijery trano hofaina izy ary rehefa mahita dia tonga manao fitsirihana momba ilay trano […]
Maty nazeran’ny Scooter ilay tovolahy
Maty tsy tra-drano ity tovolahy iray nandeha Scooter teny Andrefan’Ambohijanahary, rehefa niharan-doza, afakomaly tokony ho tamin’ny 12 ora alina. Araka ny vaovao azo, nandeha mafy izy io, niala lavaka tampoka anefa ka nifatratra tamina hazobe ilay môtô sy ilay tovolahy. Voadona mafy ny lohan’ity farany, ka nampitolefika azy. Nitarika tamin’ny fahafatesany mihitsy izany. Nentina tany […]
Ho mafy ity aogositra ity !
Par Taratra sur 05/08/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Isan’ny volana ho mafy ho an’ny fianakaviana malagasy ity volana aogositra ity. Raha vao manomboka tokoa ny fialan-tsasatry ny mpianatra, efa raikitra ny fikarakarana ny fidirana ho an’ny taom-pianarana ho avy. Ny saran’izay ho an’ny sekoly tsy miankina mety hahatratra amana hetsiny mihitsy. Satria mbola misy pitsopitsony maro manaraka eo fa tsy vita ho azy […]
Trafika andramena : hatao anio any Singapour ny fitsarana
Hiakatra fitsarana any Singapour, anio, ny “Raharaha Andramena Madagasikara”. Tokony ho efa natao tamin’ny volana mey teo izy ity, saingy mifamahofaho ny raharaha ka izao vao fantatra fa hotontosaina. Manaraka akaiky ny raharaha ny vovonana fiarahamonim-pirenena Alliance voahary gasy (AVG), vonona hanampy amin’ny fanomezam-baovao, ahitana ny marina sy ahafantarana ary hanamelohana ny meloka. Raha tsiahivina […]
Par Taratra sur 05/08/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Raikitra ny gidragidra manoloana ny vavahadin’ny ivontoeram-panadinana iray eny Ivato Seranana, omaly hariva taorian’ny fahavitan’ny bakalorea. Mpanala fanadinana miisa valo no indray noraofin’ny zandary sy ny talen-tsekoly tsy miankina iray eny an-toerana, omaly hariva. Mpianatra ao amin’ny sekoly tsy miankina iray ao Ivato Seranana ireto nosamborin’ny zandary ireto. Tsy nahaloa saram-pianarana tamin’ny volana farany […]
Par Taratra sur 04/08/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Mitohy ny fahombiazan’ny Malagasy eo amin’ny lalao CJSOI. Tsy mitsahatra ny mitombo ny isan’ny medaly volamena azo. Anisan’ny nahazo izany, ny taranja atletisma, izay tsy nampitsanga-menatra ny zava-bitany. Nampitombo ny isan’ny medaly volamena efa azon’ny Malagasy, ny taranja atletisma, omaly teo amin’ny lalao CJSOI. Fihaonana, notanterahina teny amin’ny kianjan’Alarobia. Nandrombaka 4 indray mantsy, ireo mpihazakazaka […]
Fampiaraham-peo : hiray sehatra i Black Nadia sy J love
Par Taratra sur 04/08/2016 NS Malagasy, NS-Culture
“Amour sans couleur”. Io ilay hira niarahan’i Black Nadia nampiara-peo tamin’ilay mpanakanto afrikanina J love. Araka ny efa nampanantenainy, hisy ny fiarahan’izy ireo an-tsehatra, tsy ho ela. “Hahazo tombony ny mpankafy eto Antananarivo, hahita an’i J Love an-tsehatra voalohany ny zoma izao, etsy amin’ny Le Glacier Analakely”, hoy ny nambaran’i Black Nadia. Vetivety dia nalaza […]
Federasiona malagasin’ny atletisma (FMA) : anaovan’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena antsojay
Par Taratra sur 04/08/2016 Divers, NS Malagasy
Tsy mazava. Nialoha ny handraisan’i Madagasikara ny andiany fahafolo amin’ny lalaon’ny Commission de la Jeunesse et des Sports de l’Océan Indien (CJSOI), efa fantatra fa hahazo fitaovam-pifaninanana sy fampiasa amin’ny taranja atletisma ny federasiona malagasy (FMA). Noho ny tsy fahatongavan’ireo fitaovana ireo, toy ny « haies » sy « starting block », sns, no antony goavana nanemorana ny datim-pifaninanana […]
Efa nampoizina. Tafita hiatrika famaranana amin’ny fiadiana ny lalaon’ny Commission de la Jeunesse et des Sports de l’Océan Indien (CJSOI), eo amin’ny taranja handball zazalahy, i Madagasikara sy La Réunion. Ireto firenena roa ireto izany no hidona eo amin’ny famaranana, anio, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Raha ny fizotry ny manasa-dalana omaly, tsy nahatohitra an’i […]
Hiatrika ny famaranana, amin’ny lalao baolina kitra, hiadiana ny medaly volamena, amin’ny CJSOI, ny Barea de Madagascar, vehivavy. Resiny, teo amin’ny ankatoky ny famaranana, tamin’ny isa 2 noho 0, omaly, ny Club M avy any Maorisy. Fihaonana notontosaina tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Baolina tafiditr’i Ando, teo amin’ny minitra faha-40 sy ny an’i Tsinjo, minitra faha-45, […]
Smile Party : hivelatra kokoa ny hetsika
Miditra amin’ny andiany faha-12! Efa tafapetraka ny anarana, ary efa fotoana ifanomezan’ireo tanora ny “Smile Party”, isaky ny zoma aorian’ny baccalauréat. Araka izany, Hotontosaina ny zoma 5 aogositra izao ny hetsika, etsy amin’ny AFT Andavamamba. Nitondra fanazavana ry zareo avy ao amin’ny onjampeo RDJ, mpikarakara, fa hivelatra bebe kokoa noho ny andiany taloha ny “Smile […]
Nosokafana omaly tetsy amin’ny foiben’ny vaomieram-pirenena malagasy miara-miasa amin’ny Unesco (Com.Nat. Unesco) Behoririka ny atrikasa fampianarana taosary. 30 teo ho eo ny mpandray anjara ka saika tanora sy ankizy ao anatin’ny fotoam-pialan-tsasatra ny ankamaroan’izy ireo. « Amin’ny ankapobeny, ny fototra amin’ny fanaovan-tsary no omenay. Afaka mandalina ny mpiofana avy eo », hoy Rakotoarimanana Baritiana Mickaël avy ao […]
Antsahamanitra : mbola hafa ny « Manal’azy vita Bacc »
« Manal’azy vita Bcac ». 25 taona lasa izay no nisian’izany hetsika, iarahana amin’i Olombelo Ricky, izany voalohany. Ankehitriny, mbola misy izy ary mitazona ny maha izy azy. Hotontosaina anio hariva, eny Antsahamanitra toy ny mahazatra, ny « Manal’azy vita Bacc 2016 ». « Izy indrindra », « Taratra hazavana », « Ikalangita », « Tsy mety milaza » … Hanakoako indray izany, anio hariva. Toy ny […]
Ny jeneraly Ramakavelo Désiré : ny fanajana lalàna no mampiverina ny fandriampahalemana
Par Taratra sur 04/08/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Hatramin’izao, tsy hita be ihany ny fampanjakana ny fandriampahalemana. Zava-dehibe, maika… Maneho ny fijeriny ny mpandalina tantara sady minisitry ny Fiarovam-pirenena teo aloha, ny jeneraly Ramakavelo Désiré: “Ny fanajana lalàna no mampiverina ny fandriampahalemana.” Dinidinika… Gazety Taratra (*): Ny fijerinao ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao? Jeneraly Ramakavelo Désiré (-): Manahiran-tsaina… Azo lazaina hoe tsy milamina […]
Dokambarotra : nesorina ireo takelaby tsy ara-dalàna
Par Taratra sur 04/08/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nesorin’ny kaominina Antananarivo nanomboka ny talata teo ireo takelaby misy dokambarotra tsy ara-dalàna teto an-dRenivohitra. Natoboka tetsy Ankorondrano ny fanalana ireo takelaby nisy dokambarotra tsy ara-dalàna ireo ka takelaby mirefy 12 metatra amin’ny 3 metatra (12m x 3m) tsy nahazoana alalana nefa nijoro teny amin’ny zaridaina no anisan’ny nesorina ka nentina avy hatrany eny Anosipatrana. […]
Mila hatsaraina : azo avadika ho loharanom-bola ny fako
« Mamokatra fako 1200 t isan’andro Antananarivo amin’izao fotoana izao. Tokony hisy paikady mazava hanodinana izany ho loharanom-bola ho an’ny tokantrano maro », hoy ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Rano, fahadiovana ary fidiovana, Rasoanandrasana Josephine, omaly teny Antaninarenina. Misy orinasa amin’ny sehatra tsy miankina eny Andavamamba efa mitrandraka izany, toy ny fanodinana ny diky ho entona azo ampiasaina. […]
Fisorohana : mila tilina isaky ny 2 taona ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza
Mahazo ny nono sy ny vozon’ny tranon-jaza avokoa ny 50%-n’ny homamiadana miseho eto amintsika, araka ny fanazavan’ny mpitsabo manokana ny homamiadana ao amin’ny HJRA, Razakanaivo Malala, omaly, teny Tsimbazaza. 70%-n’ny olona hisehoan’ny tranga, vehivavy eo amin’ny 35 ka hatramin’ny 70 taona eo ho eo. Betsaka ny antony miteraka ny homamiadana fa antony lehibe ny fiovan’ny […]
Zaka tsara : tsy hiasa, tsy hidinika…
Voatsikera ny mpitondra fa tsy miasa sa tsy ahafahany miasa ny tsikera? Fialana ny fisian’ny mpanakorontana sy mpanongam-panjakana isaky ny mihetsika. Misy ny fitakiana fiaraha-midinika amin’izay manahirana. Mby aiza? Eo, ohatra, ny lalàn’ny fifandraisana; ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany; ny lalàna momba ny fitsarana manokana amin’ny heloka ara-toekarena, vola, hetra; ny kolikoly avo […]
Par Taratra sur 04/08/2016 Economie, NS Malagasy
Hitondra famelabelarana momba ny toekarena sy ny politika ny eo anivon’ny fikambanana Fahefa-mividy izao no takin’ny Malagasy (FMI Malagasy). Lohahevitra : « Ny vahaolana mahomby hampihenana ny fahantrana ary hialana amin’izany ka hihatra avy hatrany amin’ny Malagasy tsirairay ». Anisan’ny fotokevitra ijoroan’izy ireo ny fanafoanana ny Mid (Marché interbancaire des devises). Ny fametrahana ny taham-bola tsy miovaova […]
« Précédent 1 … 928 929 930 931 932 … 1 113 Suivant »